🥇 ▷ Telegram ayaa lagu cusbooneysiiyaa farriimaha jadwalka ku jira ✅
Telegram ayaa lagu cusbooneysiiyaa farriimaha jadwalka ku jira
Telegramku waa mid ka mid ah codsiyadaas oo noqday mid ka mid ah macaamiishayada aannu door bidnay ee is-gaadhsiinta ku habboon iyaga. In kasta oo arjiga uu mar hore noqday 6, haddana wali waa cusub yahay sidii maalintii u horraysay, oo wuxuu sii wadaa inuu helo wararka.
Dhawaan Telegram-ka wuxuu culeyska saarayaa sidii dib loogu soo nooleyn lahaa xiriirkeena farriimahayaga. Horaanba usbuucyadii la soo dhaafay waxay naga yaabsadeen dirista farriimaha aamusnaanta ah, haatana waxay naga yaabinayaan muuqaal kale oo cusub.
Codsigayaga farriinta fariinta ee aan jecelnahay wuxuu noqonayaa 6: Hambalyo, Telegram! El Androide Libre waxaan nahay taageereyaal Telegram, codsi na mideeyay kumanaan saacadood oo shaqo iyo nashaadaad lix sano ah.
Farriimaha jadwalka loo habeeyay, hagaajinta sifiican iyo sirta
Telegram wuxuu bilaabay saacadihii ugu dambeeyay keenista cusbooneysiintiisa cusub, taas oo la timid sheeko xiise leh oo ah farriimaha. Weligaa miyaad dooneysay inaad qof u dirto fariin si aad u hesho waqti cayiman? Waxyaabaha caadiga ah ee kiisaskaani waa in la isticmaalo xusuusinta oo loo diro wakhtigaas, Laakiin waa geedi socod xasilloon.
Muuqaalka cusub ee Telegram wuxuu noo oggolaanayaa inaan qaadno farriintaas oo aan qorsheyneynay inaan marka dambe diro una daa iyada oo loo qorsheeyay. Tusaale ahaan, waxaan kaga tagi karaa ogeysiiska qorshaysan kooxda gudaheeda maalmo gudahood waqti cayiman. Xadka loo qoondeeyay farriinta jadwalku waa ilaa hal sano.
Sideed u dirtaa farriin jadwalsan? Si fudud u qor farriintaas kadibna riix oo qabo batoonka dirista. Liiska macnaha guud ayaa soo muuqan doona halka aan ugu aamusnaanno ugu dirno ama barnaamij uga qaban karno. Waxaan dooranaa maalinta iyo waqtiga wayna diyaar noqon doontaa.
Heer shaqsiyeed, waxay ila wanaagsanaan laheyd inaan macno ahaan lahaado labo maalmood ka hor. Waa inaan xasuusiyaa Pedro mid ka mid ah bartayada internetka. Waxaan xusuusiyay inaan farriinta diro laakiin aakhirka waan hilmaamay inaan diro. Sidee bay fiicnaan laheyd in lahelo howshan, iyo muxuu yahay qalab waxtar badan oo ay na siiyeen si aan u maareyno wada hadaladayada shaqo.
Ka sokow suugaan cusub, waxaa jira astaamo kale shaqsi ahaaneed iyo asturnaanta, sida mowduucyada daruuriga ah, iyo inaad u oggolaato wixii xiriirada laga yaabo inay kugu hesho ama laga yaabo inaysan kugu helin Telegram. Tani waxay noqon doontaa liistada isbedelka oo dhammaystiran.
• Midig-riix badhanka “dir” badhanka oo xulo “Farriinta Jadwalka” si aad si toos ah wax ugu dirto waqti cayiman.
• Xusuusin barnaamijyada naftaada ee ku saabsan “fariimaha la keydiyay” sheekaysiga.
• Hesho ogeysiis marka farriimahaaga qorsheysan la diro.
• U habeeya muuqaalka app adigoo dooranaya midabada iftiinka leh ee mawduucyada “Maalin”, “Habeen” iyo “Geerida”.
Dejinta asturnaanta cusub iyo inbadan
• Xulo cidda ka heli karta Telegram-kaaga adoo ku daraya lambarkaaga xiriiriyaha taleefankaaga.
• U dir ????, ????, ????, ????, ???? mise ???? si aad u aragto waxa ku cusub emojis animated.
Telegram Nooca: Qoraaga: Waxaa loo baahan yahay GUDAHA GUDAHA INSTALL APK Cabbirka: